November 22, 2020 - SANTHITSA
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ ဧရာဝတီစင်တာမှာ ကုသမှုခံယူနေတဲ့ ဦးမိုးဒီ
ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်ခံရလို့ ဧရာဝတီစင်တာမှာ ကုသမှုခံယူနေတဲ့ ဦးမိုးဒီ လူရွှင်တော်/ သရုပ်ဆောင် ဦးမိုးဒီ ဟာ ဒီကနေ့၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် ဧရာဝတီစင်တာသို့ Covid 19 ရောဂါ ရှိမရှိ သွားရောက် စစ်ဆေးခံခဲ့ရာ Positive အဖြေ ထွက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဦမိုးဒီက ခြေလက်တုန်ကာ ကိုယ်တိုင် မရပ်နိုင်ပဲ မောနေတာကြောင့် ကိုဗစ်စင်တာတွင် စစ်ဆေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဖေဖေ က ဒီနေ့၊ ဧရာဝတီ COVID စင်တာမှာ ဆေးစစ်လိုက်တာ COVID-19 Postive ဖြစ်သွားတယ်။ ဖေဖေ က အိမ်မှာ နေတုန်းက မောတယ်။ ခြေတွေ၊ လက်တွေ တုန်ပါတယ်။ …
ကမ္ဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရို ဟောကိန်းနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည်ကြီး၏ အလွန်းအားရဖွယ်ကောင်းသော အချက်များ ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာ ဖြစ်သော ကိုင်ရိုသည် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့ရာ မှန်ကန်သဖြင့် အလွန်မှပင် ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်။ တစ်နေ့တွင် မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရောက်ရှိလာလေသည်။ ကိုင်ရိုမှ ခရီးဦးကြိုဆို နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် စကားစမည်ပြောလေသည်…. ကိုင်ရိုသည်ကား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို ဟောကိန်းထုတ်ထားရာ မှန်ကန်သဖြင့် နိူင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များ ဖြင့် သိကျွမ်းလေသည်… သံအမတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကား ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသော အချိန်ဖြစ်လေသည်။ သံအမတ်က ကိုင်ရိုအားမေးလေသည်…. မစ္စတာ ကိုင်ရိုရေ တခုလောက်ကူညီပါ။ ဘာများလဲ သံအမတ်ကြီး ။ အခုက ကြီးမားတဲ့ …
ကျန်းမာရေးအတွက် မာလကာရွက်ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းကျိုး ( ၁၀ ) မျိုး
ကျန်းမာရေးအတွက် မာလကာရွက်ရဲ့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းကျိုး ( ၁၀ ) မျိုး (၁) ကိုယ်အလေးချိန် ကျစေခြင်း မာလကာရွက်သည် ကစီဓာတ်များကို သကြားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကို တားမြစ်ပေးလို့ ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေပါတယ်။ (၂) ဆီးချိူအတွက် ဆေးတစ်လက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ သုတေသနအဖွဲ့ရဲ့ လေ့လာချက်အရ မာလကာရွက်ဟာ alpha-glucosidase အင်ဇိုင်းရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကျဆင်းစေတာမို့ သွေးတွင်းအချိူဓာတ်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ ကိုယ် ခန္ဓာမှသကြားများ စုပ်ယူခြင်းကိုလဲ တားမြစ်ပေးပါတယ်။ နေ့စဉ် မာလကာရွက် ပြုတ်ရည်ကို ပုံမှန်သောက်လျှင် ၂ပတ်ကြာသောအခါ သွေးတွင်း အချိူဓာတ် ကျဆင်းတာ တွေ့ရပါတယ်။ (၃) ကိုလက်စထရောကျစေခြင်း -မာလကာရွက်ပြုတ်ရည်ကို နေ့စဉ်သောက်ပါက ၃လခန့် အကြာမှာ ကိုယ်တွင်းရှိ မကောင်းသော …